Izicwangciso zeApple zibonisa iiVenkile zeApple kwiThala leeNcwadi laseWashington eCarnegie | Ndisuka mac
Ngo-Septemba ophelileyo amarhe okuqala aqala ukusasazeka malunga nokuba kungenzeka ukuba amakhwenkwe aseCupertino avule iVenkile entsha ye-Apple kwisakhiwo somfuziselo apho iThala leencwadi laseCarnegie eWashington DC likhoyo. Emva kweenyanga ezininzi ngamarhe, iApple yafumana iimvume eziyimfuneko ukuze ikwazi ukuvula iVenkile yeApple kule thala leencwadi, kodwa njengesiqhelo, I-Apple iyithatha ngokuzolileyo xa ivula iiVenkile ezintsha ze-Apple kwaye xa kufuneka iqale ukwakhiwa. Le Ivenkile entsha ye-Apple ayikhethi. Abafana abavela eCupertino baveze nje iinkcukacha ezithile zezicwangciso zabo kule ndawo yasentsomini yeVenkile yabo elandelayo yeApple.
Uninzi lube ngamagosa ebhunga lesixeko bavakalise ukungonwabi kwabo ngokunikezela ngenxalenye yolawulo kwinkampani esekwe eCupertino. Kodwa ngokuka-Apple, izicwangciso zayo ziyayihlonipha imbonakalo yangoku yethala leencwadi kunye nendima eya kuyinika bonke abathengi bayo.
Abasebenzi bakwaApple bathi bazakusibuyisela esi sakhiwo ukubonisa ubukhazikhazi basentsimini kwaye sibe yindawo yeekonsathi, imiboniso yobugcisa yasimahla, iindibano zocweyo zokufunda kunye neeklasi zenkqubo yabantwana phakathi kwezinye izinto ezininzi.
Ngokungafaniyo nezinye iindawo, ilogo yeApple ayizukufunyanwa ngokulula kuyo yonke indawo yangaphandle, njengoko abayili bayo beza kugxila ekubuyiseleni uphawu lwembali yesakhiwo, ke ilogo yeApple iyakuba nzima ukuyifumana ...
Okwethu, ayisiyokubonisa uphawu, kodwa malunga nokuphinda ulisebenzise ibali kwakhona ngelixa ulihlonipha ngokupheleleyo.
Phakathi kweenguqulelo ezenziweyo kwisakhiwo, siyafumanisa isibane esikhanyayo esibonisa ukukhanya kwendalo Ngaphandle kokuxhomekeka kakhulu kumandla ombane, amandla aya kuthi ngokuqinisekileyo anikezwe yimithombo evuselelekayo kunye ne-96% yamancedo akhoyo athe i-Apple yasasazeka kwihlabathi liphela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple ibonisa izicwangciso zayo zeVenkile yeApple kwiThala leencwadi laseWashington iCarnegie
Akukho manani asemthethweni kodwa kuqikelelwa ukuba iApple ithengise le Q1 3.200.000 yeApple Watch